Megan Markle na Elizabeth II: baptism dị ka ihe nrịba ama nkwanye ùgwù
Nwunye nke Prince Harry, n'agbanyeghị na enweghi obi abụọ banyere agbamakwụkwọ nke ndị na-amaghị ihe ga-eme n'ọdịnihu, na-akwadebe ịkwado otu n'ime iwu ụka kachasị - ụdị baptizim, ememe nke a ga-eme na March afọ a. Ịkwado Anglicanism Megan Markle, nke a zụlitere n'okpukpe Protestant, gara leta onye Juu ahụ, kpebiri iji gosipụta nkwanye ùgwù maka Eze Ukwu Queen. Cheta na Elizabeth II abughi nani na isi ala, kama ọ bụ chọọchị Anglican. Na, dịka okwu nke na-eduga akwụkwọ Bekee, ọhụụ n'ọdịnihu adịghị agbanwe okpukpe tupu alụmdi na nwunye.
Ịmara na ndị nne na nna
Ememe a ga-eme na Kensington Palace ga-enwe nke Achịbishọp nke Canterbury. Ndị nne Megan ga-aga London nso nso. Dị ka ị maara, nne Mark, onye maarala n'ọdịnihu nke di na nwunye, ga-efe na Los Angeles, mana maka Thomas Thomas bi na Mexico, nnọkọ ya na Harry na ezinụlọ dum ga-abụ nke mbụ.
Ugbu a n'ọdịnihu dị nso, Megan ga-abụ onye òtù ezinụlọ eze, ụlọ ahịa ga-aghọkwa azụmahịa ya. Ka nwunye nwunye Harry na-akwadebe nke ọma iji sonyere ọha eze, Ụbọchị Commonwealth ga-abụ ihe nkwucha dị mma maka nke a. A na-eme ememme ezumike kwa afọ nke mba ndị ọzọ na Great Britain na Monday nke March.
A ga-esonyere Megan Markle, tinyere Queen Elizabeth II, ọrụ nke Chineke na Westminster Abbey, bụ ebe ndị ezinụlọ nile nke eze na-anọ kwa afọ. A ga-agwa ndị Megan na anya ọha na eze na ndị ọha na eze, ma ndị agbapụ na-echekwa ọdịdị nke Prince William na nwunye ya Kate Middleton, Duchess nke Cambridge.
Oge kachasị mma na oge na Intanet dị iche iche site na agbamakwụkwọ nke Prince Harry na Megan Markle!
Megan Markle tinye na mgbanaka nke nwa-nwoke Diana ma kpochapụ ụgbọ ala eletrik kacha mma n'ụwa
Emeela ka amara na ememe ahụ ga-eji ọrụ nke otu onye na-egwu egwu na onye na-agụ egwú Britain na-arụ ọrụ, otu n'ime ndị otu òtù One Direction.
Charlize Theron kwuru okwu na otu ụlọ akwụkwọ na Dubai na ụzọ dị mma
Ozi Nke Nduzi: Ọlụlụ nke ndị Dukes nke Cambridge na-atụgidere ya na eri!
A naghị ekwe Katy Perry ịga Victoria na nzuzo Victoria
N'Ịtali, ha hụrụ ụda zụrụ n'aka Kim Kardashian
Mickey Rourke - biography na ndụ onwe onye
Matt Damon na nwunye ya
Michel Mercier na Robber Hossein
Ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị ụkwụ? Ụdị ihe nzuzo nke Victoria na-egbu Gigi Hadid!
Foto ọhụrụ nke Jennifer Garner na-atụgharị uche mgbe ọ dị ime
Ihe nzuzo Victoria Victoria ji mebie nkwekọrịta ahụ na Gigi Hadid n'ihi ebubo nke ịkpa ókè agbụrụ
Ndụ onwe onye nke onye na-eme ihe nkiri Rachel McAdams
Pamela Anderson kwagara France ma na-akwadebe maka agbamakwụkwọ ahụ
Megan Fox na Brian Austin Green ghọrọ ndị nne na nna nke ugboro atọ
Nwa ahụ anaghị erube isi - afọ 2
Kedu otu esi etinye aka na onye na-azụ ihe na elliptic iji ghara ibu ibu?
Adnexitis nke oge - mgbaàmà na ọgwụgwọ
Echiche echiche nke mmadụ
Girl-doll Anastasia Shpagina
Mmepe nke ebe nchekwa na ọgụgụ isi
Leek leeks - ọma na ihe ọjọọ
Ụjọ! Ndị ọkà mmụta sayensị gosipụtara otú Meri Magdalin si yie!
Akwukwo mmanu Levomekol - egosi maka ojiji
Efere ahụ nwere onu okuko
Nick Jonas na nwunye ya
Daikon - nri nri
Kpachara anya: 10 ihe oriri nkịtị ndị nwere ike ime ka ịme ihe
Ngwunye na dea
Ụbọchị biya ụbọchị ụwa
Njikere maka ọnwụ
Turquoise akpụkpọ ụkwụ
Ọzụzụ nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ
Costa Rica - ịzụ ahịa